Vidin'ny famolavolana sary 2022 - Ne gerekir?
Lisitry ny vidin'ny mpamorona sary, saram-pandrafetana sary, 2022-2021 Vidin'ny famolavolana sary
Ny vidin'ny famolavolana sary dia nahitana fiakarana tsara ho an'ny mpamorona tamin'ny taona 2022. Na izany aza, raha mijery ny fisondrotry ny vidim-piainana sy ny areti-mifindra isika dia afaka milaza fa "mitantana" ny toe-javatra ho an'ny mpanjifa sy ny mpamorona.
Nanomana fonosana vidiny maromaro izahay izay azon'ny mpamorona vao manomboka, tsy miankina ary matihanina. Ireo no fonosana mahazatra, matihanina ary ultra-matihanina.
Inona no tokony hotadiavin'ny mpamorona rehefa manao tolo-bidy
Ny fomba fijerin'ny mpanjifa amin'ny vidiny
2022 fenitra famolavolana sary, vidiny matihanina sy matihanina
2021 graphic design standard sy vidiny matihanina
Ny vidiny mahazatra amin'ny 2022 dia eo anelanelan'ny 150-4.250.
Ny vidin'ny matihanina amin'ny 2022 dia eo anelanelan'ny 250-4.500.
Vidin'ny logo amin'ny 2022:
Fenitra: 1.000 TL
Matihanina: 1.500 TL
Vidin'ny maha-orinasa amin'ny 2022:
Fenitra: 1.750 TL
Matihanina: 2.500 TL
Lisitry ny vidin'ny Graphic Design Standard
Amin'ny maha-mpamorona azy: Raha toa ka mbola tsy nametraka ny firafitry ny orinasa ny orinasa na olona iarahanao ka tsy manana eritreritra ny hamorona azy, raha asa fohy izy io, raha tiany ny asa tiany hahatonga ny kalitao antonony, raha ny teti-bola mety ary raha vao tonga eo amin'ny sehatra misy anao ianao dia azonao omena ny vidiny etsy ambany.
Amin'ny maha mpanjifa: Tokony hojerenao toy izao manaraka izao ity toe-javatra ity; raha te asa antonony kalitao ianao ary manolotra ireto vidiny ireto dia fantaro fa ho tsotra sy tsy mety ny valiny.
Lisitry ny vidin'ny fonosana Standard Graphic Design
(Famolavolana hafa 3 + Zon'ny fanavaozana 3)
Famolavolana Logo + Karatra fandraharahana
Famolavolana ny maha-orinasa
(Famakafakana lokon'ny orinasa, Fampiasana amin'ny fiaviana samihafa, Fampiasana tsy mety amin'ny Logo, Famolavolana karatra fandraharahana, Famolavolana rakitra am-paosy, Loha-taratasy, valopy diplaomaty, Taratasy fanaraha-maso ny antontan-taratasy, famolavolana faktiora, karatra faktiora, Label CD ary famolavolana CD.)
Katalaogy Front sy Back Cover Design
Famolavolana fonon-boky na gazety
Famolavolana sora-baventy na afisy
Famolavolana flyer na brochure
(A3, A4 ary A5 safidy)
Famolavolana dokam-barotra amin'ny gazety na gazety
Fonosana Famolavolana Banner kely ho an'ny tranokalanao
Famolavolana karatra fandraharahana
(Pejy 32 mahery isaky ny pejy)
Media sosialy / Banner amin'ny tranokala / endrika endrika
Lisitry ny vidin'ny Graphic Design Professional
Amin'ny maha-mpamorona azy: Raha manana firafitry ny orinasa ny orinasa na olona iarahanao, dia orinasa maharitra, maniry ny ho vita amin'ny kalitao avo lenta ny asa tiany, raha mety ny teti-bola ary raha olona matihanina amin'ny sehatra misy anao ianao dia afaka manome ny vidiny eto ambany.
Amin'ny maha mpanjifa: Tokony hojerenao toy izao manaraka izao ity toe-javatra ity; Raha te asa tena avo lenta ianao ary manolotra ireo vidiny ireo mba hihena, fantaro fa ny kalitao dia hitovy amin'ny ao anaty fonosana mahazatra.
Lisitry ny vidin'ny fonosana Graphic Design Professional
(Famolavolana hafa 3 + Zon'ny fanavaozana 7)
(Famakafakana lokon'ny orinasa, Fampiasana amin'ny sehatra samihafa, Fampiasana tsy mety amin'ny Logo, Famolavolana karatra fandraharahana, Famolavolana rakitra am-paosy, Taratasy, valopy diplaomaty, Taratasy fanaraha-maso ny antontan-taratasy, famolavolana faktiora, karatra faktiora, hajia, kompà fandaniana, rosia fanangonam-bola, rosia fandoavana, kara-panondron'ny mpiasa , Karatra mpitsidika, Averina ny rakitra, Etikety CD sy endrika CD, Alefaso saina, saina sidintsidina, saina ambony latabatra, takelaka anaram-baravarana, Fanasana - Fiarahabana - Karatra fisaorana, Fanasana - Fiarahabana - valopy fisaorana, Certificat - Certificat de zava-bita, kitapo fanomezana , Tongasoa ny mpitsidika Izy io dia misy sonia, sonia mailaka, fahazoan-dàlana adidy.)
(3 endrika hafa)
(Safidy A3, A4 ary A5)
Media sosialy / Banner amin'ny Internet / endrika endrika
Lisitry ny vidin'ny Graphic Design Ultra Professional
Amin'ny maha-agence de design: Raha manana firafitry ny orinasa ny orinasa na olona iarahanao, dia orinasa maharitra, maniry ny asa tiany hahatongavana amin'ny kalitao faran'izay tsara, raha mifanaraka tsara amin'ny vidiny ny tetibola, ary raha matihanina ianao ary masoivoho malaza eo amin'ny sehatra misy anao, azonao omena ny vidiny etsy ambany.
Amin'ny maha mpanjifa: Tokony hojerenao toy izao manaraka izao ity toe-javatra ity; Raha mila asa faran'izay tsara ianao ary manolotra ireto vidiny ambany ireto, fantaro fa tsy hisy na inona na inona ho araka izay tianao. Angataho fa manana zo fanavaozana be dia be ianao.
Graphic Design Ultra Professional Package Price List
(Fomba endrika hafa 5 + Zon'ny fanavaozana tsy misy fetra)
(Fomba endrika hafa 3 + Zon'ny fanavaozana tsy misy fetra)
Vidin'ny Graphic Design 2021
Azontsika atao ny milaza fa ny vidin'ny famolavolana sary dia tsara ho an'ny mpanjifa sy ny mpamorona amin'ny taona 2021.
Nanomana fonosana vidiny maromaro izahay izay azon'ny mpamorona vao manomboka, tsy miankina ary matihanina. Ireo dia fonosana mahazatra sy matihanina.
(Isan'ny pejy amin'ny pejy 32)
Media sosialy / Banner amin'ny tranokala / Famolavolana Asshole
Ho an'ny mpanjifa:
Aza vonoina ny vidiny fa mitovy amin’ny famonoana ny asa azonao. Eritrereto izany, misy mpihaino izay mampihena tsy tapaka ny vidin'ny orinasanao. Amin'izao fotoana izao dia ho kely kokoa ny hanao asa tsara.
Ho an'ny mpamorona:
Raha tsy vitanao ilay asa noheverinao ho vitanao dia asaivo manao izany ny manam-pahaizana hafa, aza miteny amin'ny ankilany fa tsy vitanao izany. Dia manomboka miasa amin'izany.
Avelao amin'ny manampahaizana manokana ny asa.
Avelao ho an'ny mpamorona ny refy toy ny endri-tsoratra, teboka, fifantenana loko, haben'ny logo.
(Raha tianao izany noho ny antony iray mifandraika amin'ny mpihaino kendrena izay hisy fiantraikany amin'ireo toe-javatra ireo, dia lazao izany, fa avelao indray ny fanapahan-kevitra farany amin'ny mpamorona.
Andramo ny tsy hanoratra ivelan'ny ora fiasana, alefaso ny fanavaozanao rehetra mandritra ny ora fiasana.
Aoka ianao ho tsara fanahy amin'ny mpamorona fa raha nifidy azy ianao dia nifidy anao izy. Mety tsy hiara-miasa aminao intsony izy.
Aza manao ny tenanao ho lehibe noho ianao.
Na inona na inona mitranga, aza miady, aza mikiakiaka, ary ataovy araka izay ifanarahanao ny asa. Amin'ny manaraka dia afaka misafidy ny tsy hiara-hiasa amin'ilay olona itarainanao ny mpanjifanao ianao. Rehefa dinihina tokoa, raha mifidy anao izy dia ianao no mifidy azy.
Inona no atao hoe SEO? Fanazavana mazava sy feno
➜ Inona no atao hoe SEO?
➜ Inona no tafiditra amin'ny fizotry ny SEO?
➜ Fanontaniana apetraka matetika momba ny SEO
Manangana tranokala miaraka amin'ny Wix, mety aminao ve ny Wix?
➜ Mety aminao ve izany?
➜ Tombontsoa sy fatiantoka
➜ Fampiharana finday, ekipa, fonosana
Resadresaka nifanaovana tamin'i Ayhan Karaman momba ny SEO
➜ Inona no andrasan'i Google amintsika?
➜ Raiso ny sain'i Google
➜ Fanontaniana hafahafa nefa apetraka matetika
Resadresaka nifanaovana tamin'i Koray Tuğberk Gübur ao amin'ny Holistic SEO
➜ fahadisoana SEO
➜ Votoaty dika mitovy na tany am-boalohany?